Home Uncategorized प्रधान मन्त्रिको धाकमा व्यापारी सत्य नारायण कयालले १५ करोड रुपैयाँ विजुलीको पैसा...
२५ कार्तिक । कुलमान घिसिङले नीजि उद्योगधन्दाहरुलाई धराशायी बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका सत्य नारायण कयालले विद्युत प्राधिकरणलाई करोडौँ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । कयाल समुहद्धारा संचालित नारायणी इस्पातले विद्युत उपयोग गरेवापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने करौडौँ रुपैयाँ महशुल नतिरेको पाइएको हो ।
Previous articleकालापानी सीमा विवाद: ‘राष्ट्रवादी’ सरकार झुक्ला कि लुक्ला ? देशका जनतालाई प्रतिक्षा त्यसकै छ !
Next articleप्रधान मन्त्रिको धाकमा व्यापारी सत्य नारायण कयालले १५ करोड रुपैयाँ विजुलीको पैसा नतिरेको खुलाशा !